Berita Update Online: health benefits of grated lemon peel
health benefits of grated lemon peel Lemọn bụ ọtụtụ ebe ewu ewu, ya na-enwu gbaa na agba , ume ọhụrụ senti na invigorating uto . Ọ bụ ezie na lemon onwe ya n'ọtụtụ ebe, were ka na- nzube ọrụ ebube mkpụrụ osisi ahụ, na lemon bee na-emekarị nnọọ ina discarded , ẹsịn ke abis nke gbomgbom ahịhịa . Nke ukwu nzukọ , a n'ezie ahihia nke ukwuu isi iyi nke oriri na-edozi .
Ọtụtụ ná ndị mmadụ amaghị na lemon peels dị ukwuu isi iyi nke mineral , vitamin , potassium , na eriri . Na nkenke, oriri nke lemon peels nwere ike inyere mbo mbuli oriri gị .
Tupu ị eri nke ọ bụla n'ime ndị na- lemon peels , jide gị organic lemons . Ị na -eri ihe ọ bụla toxin na pesticides ugbu a, ị na- ?
Scrap na zest nke gị lemon peels , ndị zest nwere ike ji mee ihe mgbe e mesịrị na- Efrata nke savory ma ọ bụ ụtọ efere . Tinye ejibeghi zest ke refrjiraeto nke e mesịrị ojiji .
Ị nwere ike ime ka lemon peels n'ime lemon ose ma jiri ha na oge gị ihe oriri . Ọ dị mfe iji mee ka ma tọrọ ụtọ .
I nwekwara ike gbanwee lemon peels n'ime swiiti , ma ọ bụ tinye ya n'ime candies , ma ọ bụ ihe ọ bụla . Ị nwere ike ịhụ ọtụtụ ndị na Ezi ntụziaka nke candied lemon bee na ịntanetị . Na mgbe anyị nọ na ya, ị nwekwara ike ike lemon peels sugar . Ụtọ nha nha afọ ojuju kpom kwem.
I nwekwara ike ịhụ ọtụtụ ndị na Ezi ntụziaka na ịntanetị nke olive mmanụ uto makeover . Lemọn mmanụ na-agbakwụnye, yi ekpomeekpo ka olive mmanụ uto .
N'ihi na ụfọdụ creativity na enrichment gị ọṅụṅụ ị pụrụ itinye lemon bee n'ime ice cubes . Jide n'aka na ị na -ezere ndị na-acha ọcha dị ilu pith doo .
O nwere ike ụda dị egwu , ma e nwere n'ezie Ezi ntụziaka maka ogwu na lemon zest butter .
Lemọn bee nke ihicha .
Lemọn mmanya , mere si lemon bee , bụ greats maka griiz mwepụ . Ọ dị mfe iji mee ka ị dị nnọọ itinye ụfọdụ lemon peels n'ime ite , tinye ụfọdụ na-acha ọcha mmanya , mechie mkpuchi ma na-ahapụ ya iri na anọ na ụbọchị tupu ị na -anakọta dapụtara mmiri mmiri . Mix a mmiri mmiri na mmiri na- hà ruru gị nwetara gị niile nzube asana n'ụlọnga.
I nwekwara ike iberi obere ego nke lemon peels tinye ha na ihe ọ bụla o kwere omume n'ọnụ ụzọ ebe ụmụ ahụhụ pụrụ isi na-aga site na , na ichughachiazu ahụhụ. Tụgharịpụta lemon peels abụghị ọkacha mmasị senti n'ihi na ndanda , roaches na fleas . Dọba n'ime ngwa nju oyi , lemon peels nwere ike banye fouls na-esi isi ma na -agbasa ume ọhụrụ citrus senti . Ma ọ bụghị nanị ndị a ngwa nju oyi , i nwere ike itinye ụfọdụ lemon peels n'ime gbomgbom ahịhịa maka otu ihe ahụ pụrụ isi kwuo ya .
Diposting oleh Lisa Fernandez di 09.05